Madaxweynaha oo dib Muqdisho ugu laabtay. – SBC
Madaxweynaha oo dib Muqdisho ugu laabtay.
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta dib ugu soo laabtey magaalada Muqdisho, kadib markii uu magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud kaga soo qeybgaley munaasabadda caleema saarka madaxda maamulka cusub ee KMG ee Galmudug.
Madaxweynaha oo socdaalkiisa ay ku wehliyeen xubno ka tirsan labada gole, ayaa khudbad uu ka jeediyay xafladda caleema saarka diiradda ku saarey sida dowladda ay uga go’an tahay dhaqangelinta nidaamka xukunka lagu baahinayo, si shacabka ay u helaan adeeg hufan oo baahidooda daboolaya.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa intaanu ka soo ambabixin Cadaado kula dardaarmey madaxda Galmudug inay ka shaqeeyaan nabadda, isla markaana dowladdu ay diyaar u tahay inay kala shaqeyso xalinta tabashooyinka inta badan ka dhasha dhismaha maamullada.
Wafdiga Madaxweynaha waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhoweeyay mas’uuliyiin ka tirsan labada gole.